OnePlus 5T: Tilmaamaha, qiimaha iyo helitaanka waa la xaqiijiyay | Androidsis
Toddobaadyadan la soo dhaafay marar badan ayaan ka hadalnay OnePlus 5T. Telefoonkan cusub ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay ayaa abuuray xiisad iyo xan badan. Ku dhowaad toddobaad ayaa laga joogaa markii qeexida qalabka. Laakiin, Ma ahayn shalay, 16-ka Nofeembar, in munaasabadda bandhigga rasmiga ah dhacay.
Ugu dambeyntii, sugitaan dheer ka dib, waxaan horeyba u ogaanay wax walba oo ku saabsan OnePlus 5T. Nooc cusub oo ka mid ah OnePlus 5, oo imanaya qiyaastii shan bilood ka dib. Marka xigta waxaan kuu sheegeynaa dhammaan wixii ku saabsan faahfaahinta, qiimaha iyo helitaanka qalabkan. Diyaar ma u tahay inaad la kulanto taleefankan cusub?
Marka hore waxaan idin soo bandhigaynaa liiska buuxa ee qeexitaanada OnePlus 5TMarka, waxaan xaqiijin karnaa illaa xadka ay daadadka toddobaadyadan sax ahaayeen.
1 Tilmaamaha OnePlus 5T
Tilmaamaha OnePlus 5T
Mid ka mid ah dhinacyada sida aadka ah u soo jiitay dareenka tan iyo markii naqshadeynta la xaday ayaa ah in nooca Shiinaha uu ugu dambeyn ku biiro muuqaalka muuqaalka aan xaddidaneyn. Marka taleefankan casriga ah ee cusubi wuxuu leeyahay shaashad leh saamiga 18: 9, saamiga xiddigga ee 2017. Taasoo hubaal noqon doonta sannadka dambe sidoo kale.
Kuwani waa qeexitaannada buuxa ee OnePlus 5T:
Nidaamka hawlgalka: Android 7.1.1 Nougat hoosta OxygenOS 4.7.0
Screen: 6,01-inch AMOLED oo leh taageerada sRGB iyo DCI-P3 oo leh Gorilla Glass 5
Xalinta shaashadda: Qaraarka FullHD 1.080 x 2.160 pixels
Saamiga shaashadda: 18: 9
Cufnaanta Pixel: 401ppi
Gacaliye: Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core 10 nm oo ah 2,45 GHz
RAM: 6 ama 8 GB
Kaydinta: 64 ama 128 GB
Kaameerada hore: 16 MP Sony IMX371 oo leh f / 2.0 aperture
Cámara trasera: Dual camera 16 MP aperture f / 1.7 Sony IMX 398 iyo + 20 MP aperture f / 1.7 Sony IMX 376K leh Dual LED Flash
Batariga: 3.300 mAh oo leh lacag dash Dash Charge
Xuduudaha kala duwan: LTE Bisad. 13, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, Wi-Fi MIMO 2 × 2
kuwa kale: Akhristaha sawirka faraha, dhabarka furitaanka aqoonsiga, 3.5mm jack headphone, Dual SIM, USB 2.0 Type-C, Slider Alert
Cabbirada: 156,1 x 75 x 7,25 mm
Peso: 162 garaam
Waxyaabaha: Anodized aluminium anti-faraha
Sida aad ka arki karto tilmaamaha rasmiga ah ee qalabka, laba nooc oo taleefanka ah ayaa la sii dayn doonaa. Laba isku-dhafan oo suurtagal ah ee RAM iyo kaydinta oo laga kala xusho dadka isticmaala. Wax horey u soo ifbaxay, laakiin taas horay ayaa loo xaqiijiyay si rasmi ah. Inta soo hartay, waan arki karnaa taas Faahfaahinta badankeed waxaa lagu muujiyay daadinta usbuucii hore. Marka waxaa jira waxyaabo kadis ah, laakiin waxaa la dhihi karaa OnePlus 5T waa taleefan aad u awood badan waana hubaal inuu wax badan ka jeclaan doono suuqa.
Ka dib markaan ogaanay qeexitaanka buuxa ee qalabka, su'aasha xigta ee weyn ee aan isweydiineyno waa imisa qiimaha ay ku kacayso. Sidoo kale, goorma ayey iib noqon doontaa. Nasiib wanaagse, munaasabadda soo bandhigida qalabka ayaa sidoo kale u adeegtay si looga jawaabo su'aalahan. Qaybta fiicani waa taas Waa la dhaafay maalmaha aad u baahan tahay martiqaad si aad u iibsato taleefanka OnePlus. Maalmahaasi hadda waxay ka mid yihiin waayihii la soo dhaafay.
Ka dib isbeddelka caadiga ah ee shirkadda, qiimaha OnePlus 5T ayaa si muuqata muuqata uga hooseeya kan ugu badan ee telefoonada sare Ka imanaya suuqa. Dareenkaasi ma jiro wax lala yaabo. Xaqiiqdii, qiimaha noocyadan cusub ee qalabku isma beddeli doono marka loo eego kii ka horreeyay.
El Qiimaha OnePlus 5T wuxuu noqon doonaa 499 euro ama 499 doolar, waxay kuxirantahay suuqa, nooca leh 6GB RAM iyo 64GB oo keyd ah. Halka nooca taleefanka oo leh 8GB RAM iyo 128GB oo keyd ah uu leeyahay qiimaha 559 euro ama 559 dollars.
Ku saabsan helitaanka qalabka. OnePlus ayaa sidaas xaqiijisay Waxaa laga heli doonaa dhowr dal oo Yurub ah, oo ay ku jiraan Spain, laga bilaabo Talaadada, Nofeembar 21. Sidoo kale waxaa laga heli doonaa Maraykanka. Iibsiga aaladda ayaa suurtagal noqon doonta iyada oo loo marayo websaydhka shirkadda. Sugitaanku horeyba wuu u dhammaaday, Talaadada waa suurtagal in la iibsado OnePlus 5T. Sideed u aragtaa taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha? Ma ku noolaanaysaa filashooyinka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus 5T hadda waa rasmi: Ogow dhammaan faahfaahinta